DEG DEG: Wariyayaal galabta lagu Dili rabay Muqdisho‚‘‘Ciidanka DFS Isgoyska Zoobe ayay nagu rasaaseeyeen‘‘ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Wariyayaal galabta lagu Dili rabay Muqdisho‚‘‘Ciidanka DFS Isgoyska Zoobe ayay...
DEG DEG: Wariyayaal galabta lagu Dili rabay Muqdisho‚‘‘Ciidanka DFS Isgoyska Zoobe ayay nagu rasaaseeyeen‘‘
Muqdisho (Halqaran.com) – Warar goor-dhow caawa na soo gaaraya ayaa sheegaya, in gelinkii dambe isniintii maanta gaari ay la socdeen Wariya-yaal Soomaaliyeed lagu rasaaseeyay Magaalada Muqdisho, xilli ay marayeen Isgoyska Zoobe ee Degmada Wadajir.
Suxufiyiitaan oo tiradoodu ay afar ahayd ayaa saddex ka mida waxay ka tirsan yihiin Telefishnka Aljazeera, halka midka kalena uu yahay sawirqaade ka hawlgala Wakaaladda Wararka Reuters.
Gaariga ay wateen Wariyayaasha oo maraayay Isgoyska Zoobe ayaa waxaa rasaaseeyay askar ka tirsan Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir, xilli wadada uu mashquul ka jiray.
Faysal Cumar Xaashi oo ka tirsan Wakaaladda Wararka Reuters ayaa sheegay in afartii iyo barkii galabnimo ee maanta ay rasaaseeyeen Ciidamada Booliska, xilli aanay ku kicin wax sharciga ka baxsan.
Wuxuu kaloo xusay in meel dhexe uu ka soo raacay gaarigaasi oo Aljazeera ay leedahay, isla-markaana ay Ciidamada Booliska ku amrayn in ay gaariga ka soo deggaan, ka dibna ay jirdil kula dhaqaaqeen, sidoo kalena ay ka qaadeen kaamirooyinkii ay wateen.
Faysal Cumar oo la hadlay Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa tibaaxay in Ciidamada Booliska ay ku sigteen inay dilaan, balse uu Alle ka badbaaday, isagoo intaa ku daray inaanay garanayn sababta noloshooda loo halis geliyay.
Shantii iyo barkii galabnimo markii ay ahayd ayuu sheegay in loo tilmaamay in ciidamadaasi ay taggeen Isgoyska Banaadir, isla-markaana ay ugu taggeen, ayna ka codsadeen inay dib ugu soo celiyaan qalabkii ay ka qaadeen.
Faysal Cumar ayaa ku waramaya in Ciidamada Booliska ay weydiiyeen sababtii ay sidaasi foosha xun ugula dhaqmeen, balse aanay ka helin jawaabtii ay ka doonayeen.
Iyadoo Wariye-yaasha Soomaaliyeed ay daruufo adagi ku shaqeeyaan ayaa hadana si joogto ahi loogu dhibaateeyaa gudaha dalka. Kooxaha ugu tunka weyn ee Somaliya amaba ku gacan sareeya siyaasadda dalka ayaa caadeystay waxyeelaynta Saxafiyiinta.
Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu halista badan dunida ee Wariye uu ka hawlgalo.
Si kastaba ha’ahaatee, wariyaha Soomaaliya ka hawlgala ayaa waxaa dhici karta inta uu shaqadiisa ku guda jiro in la dilo, la dhibaateeyo, la xiro amaba loo cago-jugleeyo.
Wariyeyaal ka tirsan Aljazeera
Weriyeyaal lagu jir dilay Muqdisho